Layaab: Ma ogtahay Xidigo waaweyn oo lagu kala iibsadey in ka yar £10m taariikhda Premier league? – Gooldhalin
Layaab: Ma ogtahay Xidigo waaweyn oo lagu kala iibsadey in ka yar £10m taariikhda Premier league?
Mohamed Shariif May 11, 2018	No Comments
Suuqa kala iibsiga waa mesha ugu badan ee kooxaha lacag ka sameeyaan iyagoo u sii maraya iibsashada ciyaaryahanadooda tayada leh.
Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hada jira marka loo fiiriiyo kii hore waxaa u dhaxeeya farqi weyn oo xagga kala gadashada ciyaaryahanada.
Waxaa jira taariikhda ciyaaryahano waaweyn oo qiimo raqiis ah lagu iibiyey markii ay tageen kooxahooda cusub guul waawey la gaaray,koobabna kula guuleystay.
Hadaba aan eegno 5ta ciyaaryahan ee qiimaha raqiiska ah lagu getay hadana bandhiga cajiibka sameeyey.
#1: Eric Cantona – £1.2m
Eric Cantona oo kooxda Manchester united kula guleystay afar horyaal oo Premier League ah iyo labo FA Cup, ayaa kooxda Leeds United waxaa ay sanadii 1992 ka iibisey Kooxda ay xifaaltamaan ee Man united aduun lacageed dhan £ 1.2 milyan oo gini.
Dad badan ayaa isweydiiyey waxa sababay in Leeds ay lacagtaas ku iibiso king Eric oo wacdaro ka dhigey Horyaalka Premier League.
#2: Nathaniel Chalobah – £5m
Inkastoo xiddiga khadka dhexe Nathaniel Chalobah uusan wax ku filan ka helin Watford islamarkaana loo arko inuu yahay mid hooseeya, weli wuu fiicnaa qaab ciyaareedkiisa qeybtii hore ee xilli ciyaareedkii 2017/18, laakiin dhaawac jilibka ah ayaa soo gaaray bishii September.
Watford ayaa 5 milyan oo ginni ku soo iibsatay xiddigii hore ee Chelsea,taas oo layaab noqotay.
#3: Kevin de Bruyne – £18m
Kooxda Chelsea ayaa £ 18m ku soo iibsatay xidiga Kevin de Bruyne waxana ay ka soo qaateen kooxda Wolfsburg xili ciyaareedkii 2013/14 – Blues ayaa sidoo kale saxiixday Andre Schurlle ciyaartoyda badan sida Stefan Jovetic, Alvaro Negredo, Roberto Soldado iyo Erik Lamela ayaa dhamaantood lacagtaas lagu soo iibsadey.
Manchester City ayaa ugu dambeyn ku soo iibsatay 55 milyan oo ginni xidigaan ka dib markii ay 37 milyan oo ginni isaga sii iibisay Chelsea.
#4: Wilfried Zaha – £3m
Wilfried Zaha oo xidiga bisha ugu wanaagsan April ku guleystay ayaa hada waxaa doonaya kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin Man city, Liverpool iyo Tottenham, waxaana lagu qiimeeyey lacagta lagu iibin karo xidiga inay gaareyso £ 50m.
Arinta xiisaha badan ayaa ah in xidigan kooxda Crystal Palace ay ku soo qadatay kaliya £ 3milyan sanadii 2015 waxaana ay ka soo gateen Manchester United.
Dabcan Faa’ido badan aye heli doontaa Crystal Palace hadii ay iibiso xidigaan garabka ka ciyaara.
#5: Teddy Sheringham – £3.5m
Sanadii 1997 Sheringham ayaa 5 xilli ciyaareed ku qaatay Tottenham,waxaana uu u dhaliyey goolal badan.
Laakiin mudo kadib kooxda Spurs ayaa Man united ku siisey xidigaan aduun dhan £ 3.5milyan.
Waxaa u ku guuleystay intii uu joogey kooxda United seddex jeer Premier League iyo Champions League hal mar, waxaana sidoo kale loo magacaabay ciyaaryahanka sannadka ee PFA sannadkii 2001.
Previous Previous post: Ma ogtahay 5ta ciyaaryahan ee bedelka u noqon karta Mohamed Salah hadii uu ka tago koxda Liverpool?
Next Next post: Ferguson ka dib: ma taqaana 5tii saxiix ee ugu fiicnaa Manchester united ay sameesey?